Hezekile 43 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
43 Yandula ke yandisa esangweni, isango elijonge ngasempuma.+ 2 Yaye, khangela! ubuqaqawuli+ boTHIXO kaSirayeli babusiza buvela kwicala lasempuma,+ kwaye ilizwi lakhe lalinjengesandi samanzi amaninzi;+ nomhlaba wakhanya ngenxa yobuqaqawuli bakhe.+ 3 Lwalunjengembonakalo yombono endandiwubonile,+ njengombono endandiwubonile xa ndandisiza konakalisa isixeko;+ kwakukho neembonakalo ezinjengembonakalo endandiyibone ngakuMlambo iKebhare,+ ndaza ndawa ngobuso. 4 Ubuqaqawuli+ bukaYehova beza eNdlwini ngendlela yesango elibheke empuma.+ 5 Waza umoya wandiphakamisa+ wandisa kwintendelezo engaphakathi, yaye, khangela! iNdlu yayizele bubuqaqawuli bukaYehova.+ 6 Ndeva uthile ethetha nam apho eNdlwini,+ yaye indoda leyo yayimi ecaleni kwam.+ 7 Yahlabela mgama yathi kum: “Nyana womntu, le yindawo yetrone yam+ nendawo yentende yeenyawo zam,+ apho ndiya kuhlala khona phakathi koonyana bakaSirayeli ukusa kwixesha elingenammiselo;+ yaye bona, indlu kaSirayeli, abayi kuphinda balenze inqambi igama lam+ elingcwele, bona nookumkani babo,+ ngokuhenyuza kwabo nangezidumbu+ zookumkani babo ekufeni kwabo, 8 ngokufaka kwabo umbundu womnyango wabo ngasembundwini womnyango wam nomgubasi wabo ngasemgubasini wam, kukho udonga phakathi kwam nabo.+ Yaye balenza inqambi igama lam elingcwele ngezinto zabo ezicekisekayo abazenzayo,+ ukuze nje ndibatshabalalise ndinomsindo.+ 9 Ke kaloku mabasuse uhenyuzo lwabo+ nezidumbu zookumkani babo zibe kude kum,+ kwaye ngokuqinisekileyo ndiya kuhlala phakathi kwabo ukusa kwixesha elingenammiselo.+ 10 “Wena ke, nyana womntu, yazisa indlu kaSirayeli ngeNdlu le,+ ukuze bazive bethotyiwe ngenxa yeziphoso zabo,+ yaye bamele balinganise umfanekiselo. 11 Yaye ukuba okunene baziva bethotyiwe ngenxa yako konke oko bakwenzileyo, bazise ukuma kweNdlu le,+ nokulungelelaniswa kwayo namasango ayo okuphuma nawokungena, konke ukuma kwayo nazo zonke iinkcukacha zayo, nako konke ukuma kwayo nayo yonke imithetho yayo uze ubhale phambi kwamehlo abo, ukuze bagcine konke ukuma kwayo nazo zonke iinkcukacha zayo baze okunene bazenze.+ 12 Nguwo lo umthetho weNdlu leyo. Kumphezulu wentaba ummandla wayo uphela macala onke uyeyona nto ingcwele.+ Khangela! Nguwo lo umthetho weNdlu leyo. 13 “Yaye le yimilinganiselo yesibingelelo ngokweekubhite,+ ikubhite iyikubhite nobubanzi besandla.+ Nomzantsi waso yikubhite. Nobubanzi yikubhite. Umqukumbelo waso eludinini macala onke, lungangomolulo omnye weminwe. Sisiseko sesibingelelo ke esi. 14 Ukususela kumzantsi osemgangathweni ukusa kwinqwanqwa elijikelezileyo ziikubhite ezimbini, yaye ububanzi yikubhite enye. Nokususela kwinqwanqwa elincinane elijikelezileyo ukusa kwinqwanqwa elikhulu elijikelezileyo ziikubhite ezine, ububanzi baso yikubhite. 15 Iziko lesibingelelo ziikubhite ezine, yaye ukuphuma ezikweni lesibingelelo kuse phezulu ziimpondo ezine.+ 16 Kwaye ubude beziko lesibingelelo ziikubhite ezilishumi elinesibini, neekubhite ezilishumi elinesibini ububanzi,+ lisisikwere kumacala alo omane.+ 17 Inqwanqwa elijikelezileyo ziikubhite ezilishumi elinesine ubude, neekubhite ezilishumi elinesine ububanzi, kumacala alo omane; nomqukumbelo olingqongileyo sisiqingatha sekubhite, nomzantsi walo yikubhite macala onke. “Nezinyuko zalo zijonge ngasempuma.” 18 Yaye yathi kum: “Nyana womntu, itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Le yimimiselo yesibingelelo ngemini yokwenziwa kwaso, ukuze kunikelwe phezu kwaso iminikelo etshiswa kuphele+ nokuze kufefwe ngegazi kuso.’+ 19 “‘Yaye umele ubanike ababingeleli bobuLevi,+ abayinzala kaTsadoki,+ abo basondelayo kum,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova, ‘ukuze balungiselele kum, ithole lenkomo eliyinkunzi, ithole lomhlambi, libe ngumnikelo wesono.+ 20 Uze ke uthabathe intwana yegazi lalo, ulifake ezimpondweni zaso zone nakwiimbombo zone zenqwanqwa elijikelezileyo nakumqukumbelo macala onke uze uzisulungekise esonweni,+ usicamagushele.+ 21 Umele uthabathe ithole lenkomo eliyinkunzi, umnikelo wesono, yaye limele litshiswe kwindawo emiselweyo apho eNdlwini, ngaphandle kwengcwele.+ 22 Ngomhla wesibini uya kusondeza iduna lebhokhwe, eliphilileyo, libe ngumnikelo wesono; yaye bamele basisulungekise isibingelelo esonweni njengoko bebesisulungekisile esonweni ngethole lenkomo eliyinkunzi.’ 23 “‘Ekugqibeni kwakho ukusisulungekisa esonweni uya kusondeza ithole lenkomo eliyinkunzi, ithole lomhlambi, eliphilileyo, nenkunzi yegusha emhlambini, ephilileyo. 24 Kwaye umele uzisondeze phambi koYehova, yaye ababingeleli bamele bagalele ityuwa phezu kwazo+ baze bazinikele zibe ngumnikelo otshiswa kuphele kuYehova. 25 Kangangeentsuku ezisixhenxe uya kunikela inkunzi yebhokhwe ibe ngumnikelo wesono ngemini;+ nethole lenkomo eliyinkunzi, ithole lomhlambi, nenkunzi yegusha emhlambini, ezigqibeleleyo, baya kunikela ngazo. 26 Kangangeentsuku ezisixhenxe baya kucamagushela+ isibingelelo, yaye bamele basihlambulule baze basimisele. 27 Baya kuzigqiba ke ezo ntsuku. Yaye kuya kuthi ngomhla wesibhozo+ nokususela ngoko kuse phambili ababingeleli banikele esibingelelweni iminikelo yenu etshiswa kuphele neminikelo yenu yobudlelane; kwaye ngokuqinisekileyo ndiya kukholiswa nini,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova.”